धनुषामा निस्कियो भैंसी जुलुस, घाँटीमा छन् यस्ता प्लेकार्ड
अषोज १७, २०७८ आइतबार 64
काठमाडौ । धनुषाका आइतवार अनौठो जुलुस निस्केको छ । स्थानिय बासीन्दा घर घरवाट भैसी लिएर जुलुसमा निस्केका छन् । भैंसीको घाँटीमा प्लेकार्ड झुण्ड्याइएको छ । जसमा कर्मचारी र मेयर भनेर उल्लेख गरिएको छ । धनुषाको सबैला नगरपालिकामा सूचना माग गर्दै स्थानियले आइतवार यस्तो जुलुस निकालेका हुन् ।
सडकमा भैंसीको लस्कर निस्केपछि स्थानिय पनि छक्क परेका हेरेका थिए । स्थानिय तहमा हुने काम आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको बारेमा जानकारी माग गर्दा नदिएपछि आइतवार भैँसी जुलुस निकालिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिका पदाधिकारीले नगरप्रमुख विजयशंकर साहसँगै कर्मचारीलाई भैँसीको संज्ञा दिँदै जुलुस निकालेका हुन् ।
पालिकाले सूचना दिन आलटाल गरेको भन्दै उनीहरू रिले अनशनमा छन् । त्यसकै समर्थनमा १४औँ दिनमा भैँसी जुलुस निकालिएको समितिका संयोजक सुरेश यादवले बताए ।
यही असोज ४ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालयअगाडि समितिका पदाधिकारीहरू रिले अनशन बसिरहेका छन् । समितिले गएको जेठ २३ गते हुलाकमार्फत पालिकासँग विभिन्न सूचना माग गरेको थियो । त्यसअघि पनि लिखित र मौखिक रूपमा सूचना माग गर्दा नदिइएको समितिका महासचिव मेथल साहको भनाइ छ ।
समितिले हुलाकमार्फत दर्ता गराएको निवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको दस्तावेज, संसदीय विकास कोषबाट काम भएको योजनाको स्पष्ट विवरण, क्वारेन्टिन सञ्चालन र रोकथामको लागि खर्च भएको सम्पूर्ण आयव्ययको सूचना माग गरिएको छ ।
Prev१० कक्षा फेल यी अटो रिक्सा चलाउने युवकको एकाएक फेरियो भाग्य, पुगे स्विजरल्याण्ड , यो एक कारणले यी गोरी म्याडमले गरिन बिहे
Nextविद्युत् प्राधिकरणले तार काटेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक आन्दोलनमा
‘यस्ता पु,रुषलाई मन प,राउछन म,हिला’
नर्सलाई सबैभन्दा धेरै तलब दिने १० देशहरु । कुन देशमा कति हुन्छ कमाई !
बे,पत्ता नेपाली खोज्न ड्रोन उडाउन नदिने भारतले बिना अनुमति निरन्तर हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा ?
मोरङमा आमाले ‘केटासंग फोनमा धेरै कुरा नगर’ भनेर सम्झाइन्, रिसाएर हिँडेकी १६ वर्षकी छोरी २० हजार भारुमा …?
काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा प्रचण्डको मृत्यु (1537)